Brief iwebata EPA - Nantong ndanda Machinery Co., Ltd
Ala ala Compactor
Igwe eji asụ ahịhịa
Honda mmanụ ụgbọala engine
Brief iwebata EPA
Oge: 2017-09-30 Hits:
The United States Environmental Protection Agency (EPA ma ọ bụ mgbe ụfọdụ USEPA) bụ ihe gị n'ụlọnga nke U.S. gọọmenti etiti nke e kere n'ihi nzube nke na-echebe ụmụ mmadụ na ahụ ike na gburugburu ebe obibi site na ide ihe na ịmanye ụkpụrụ dabeere na iwu gafere site Congress. The EPA e chọrọ site President Richard Nixon wee malite ime ihe on December 2, 1970, mgbe Nixon aka onyeisi iji.
The EPA nwere ya n'isi ụlọ ọrụ dị na Washington, D.C., mpaghara itieutom ọ bụla nke gị n'ụlọnga \_ 's iri na mpaghara, na 27 laboratories. The gị n'ụlọnga enịmde gburugburu ebe obibi ntule, research, na-akụziri. Ọ nwere ibu ọrụ nke ịnọgide na-enwe na ịmanye mba ụkpụrụ n'okpuru a dịgasị iche iche nke gburugburu ebe obibi iwu, na oge na obodo, agbụrụ, na obodo ọchịchị. Ọ bịara mgbakọ ahụ ụfọdụ ekwe, nlekota oru, na mmanye ọrụ U.S. na-ekwu, na Native American ebo. EPA mmanye ike gụnyere Iwu, sanctions, na ndị ọzọ na jikoro. The gị n'ụlọnga na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na niile etoju nke ọchịchị a dịgasị iche iche nke afọ ofufo mmetọ mgbochi omume na-ike na nchekwa umu mgbalị.
The gị n'ụlọnga nwere ihe dị ka 17,000 oge ọrụ. na-eme ọtụtụ ndị ọzọ na a contractual ndabere. Ihe karịrị ọkara nke EPA nchịkwa mmadụ bụ injinia, ọkà mmụta sayensị, na gburugburu ebe obibi-echebe ọkachamara; ọzọ dị iche iche na-agụnye iwu, ọha na eze na-eme, ego, na ozi Technologists.
Logo nke EPA
Na Mbụ: Brief iwebata Air-Cleaner
Osote: Nka na ụzụ Core nke Rammer